UTK – Crime News
တစ်နေ့သောအခါ တစ်ခုသော မြန်မာမှုစင်တင်တေးဂီတစားသောက်ဆိုင်တစ်ခု၌ ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့် ရှေ့နေတစ်ဦး တို့သည် ညညတွင်မကြာခဏ ရောက်ရှိလာတတ်ပြီး
(ေသခ်ာရဲ႕လား) Are you sure?
ကိုျဖဴ ။ ။ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ဥပေဒေတြက တိက်ေရရာမႈရွိရဲ႕လားဆရာ? ယူတီေက ။ ။ ဥပေဒဆိုတာ ဥပေဒျပဳႏိုင္တဲ့ (လူပုဂၢိဳလ္/အာဏာပိုင္/အဖြဲ႕/ပါလီမန္/လႊတ္ေတာ္) ျပ႒ာန္းတဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔ /ဓမၼသတ္စီရင္ထုံးမ်ားအရ အာဏာတည္တဲ့
ကနေ့တော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီး တရားရုံးက ထောင်ချလိုက်တဲ့ တရားခံဟာ ကျခံရမဲ့ ထောင်ဒဏ်ကို ထောင်ထဲ မှာ မခံစားရဘဲ အရပ်ထဲမှာ (နေမြဲ၊ စားမြဲ၊ သွားမြဲ၊ လာမြဲ၊
ကနေ့တရားရုံးတွေမှာ တရားမမှုထဲက အဖြစ်အများဆုံးအမှုတွေက”အမွေမှု၊ ချေးငွေ ရလိုမှု၊ ကတိပဋိညာဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုမှု၊ ကတိပျက်လျော်ကြေးရလိုမှု၊ ကျူးကျော်သူအား နှင်ထုတ်လိုမှု”တွေများတယ်။